Kushambidzika uye kutarisirwa kwemuviri kuGreek yekare | Absolut Kufamba
Zvinoenderana nemirawo yefilosofi yekare yechinyakare, hunhu muGreek hwakaenda pamwe nerunako nekutarisira muviri. Panguva iyoyo, izwi rinoreva zvakafanana kuva mugari akanaka raive nemuviri unochengetwa zvakanaka uye vakanyatsodzidziswa. Varume vanorovedzwa kwemaawa mumajimu kuti vabudirire hunhu hwekare hwekunaka kunoenderana nekubatana uye nemitambo yemitambo
MaGreek, pamusoro pekuchengetedza miviri yavo muchimiro chakanaka kuburikidza nechirongwa chakasimba chekurovedza muviri, zvakare vane hanya zvakanyanya nezve hutsanana hwemunhu. Mushure mekudzidzira jimunasitikisi, vakatevera tsika yekuchenesa ganda kusvika pakushandisa chinamato cherunako kuita imwe yembiru dzetsika yavo, iyo yaive nemhedzisiro yayo kune mamwe mabudiriro.
Munyaya ino takaongorora izvo kushambidzika uye kuchengetedza muviri kwaisanganisira kuGreek yekare. Iwe unoda kuziva zvakawanda? Ramba uchiverenga!
1 Chimbuzi kuGreek yekare
2 Yese yekugezera veruzhinji kuGreek
3 Vakadzi mumabhawa eruzhinji eAtene
4 Iyo yakanaka yekunaka kwechikadzi muGreek yekare
5 Kuchengetwa kwebvudzi munguva dzekare
6 Bvudzi kubviswa mune yechinyakare nyika
7 Tsika yekushambidzika mune dzimwe tsika
Chimbuzi kuGreek yekare
Tinogona kuona mumifananidzo yemamphoras akapona kusvika nhasi maGiriki ekare ainetseka zvikuru nezvekuva nemuviri wakaenzana uye wakagwinya, saka vakawana zvirongwa zvekurovedza muviri zvinoda kuti vawane muviri unowirirana uye wakanaka.
Mumamphoras vatambi vaisamiririrwa chete vachidzidzira mitambo asi vachiitawo tsika yekuchenesa nekutarisira muviri unotevera. Uye ivo vakapendwa nechavo runako accessories, semuenzaniso midziyo midiki ine mafuta anonhuwirira ayo akaremberedzwa pamadziro kana kusungirirwa pamaoko evamhanyi.
Ash, jecha, pumice dombo uye rose, almond, marjoram, lavender nesinamoni mafuta akashandiswa kuchenesa ganda mushure mekurovedza muviri. sekuchenesa mafuta, zvinonhuwira uye zvinonhuhwirira. Chimwe chishongedzo chavaishandisa chaive chakareba, chakapetwa chipunu chakaita kunge simbi wand yekubvisa guruva rakawandisa nemafuta paganda.
Mu Museum yekuchera matongo eGreek unogona kuona mimwe mienzaniso yemirongo iyo yaishandiswa kuchengeta zvinhu izvi nemishonga yekuchenesa. Aive macontainer akagadzirwa nevhu kana alabaster aimbo shongedzwa uye aive nemhando dzakasiyana.
Yese yekugezera veruzhinji kuGreek
Zvinozivikanwa kuti mabhawa eruzhinji aivepo muAthens kubva muzana ramakore rechishanu BC, nzvimbo dzaienda vanhurume mushure mekuekisesaiza kwete kungogeza chete asiwo kutaura nevamwe vashandisi, sezvo dzaionekwa senzvimbo dzakakurumbira dzemisangano.
Mabhati eruzhinji eGreek yekare yaive nzvimbo hombe dzaibata mazana evanhu uye dzakakamurwa kuita nzvimbo dzinoverengeka. Kutanga iwe wakawana iyo frigidarium (imba ine mvura inotonhora yekugeza uye kubvisa ziya), ipapo yaive nguva yeiyo tepidarium (imba ine mvura inodziya) uye pakupedzisira ivo vakaenda ku caldarium (imba ine sauna).
Vanachiremba venguva yacho vakakurudzira kutora mabhati emvura inotonhorera nekuti vakavandudza muviri nemweya apo mabhati anopisa aishandiswa kuita kuti ganda riite kunge rakatsetseka uye rinonaka.
Kana tsika yekugeza yapera, maseva acho aibvisa tsvina kubva paganda rawo nekuaisa wax. Ipapo masseurs akapindira, avo vakazora mafuta anonhuwirira pamitumbi yavo kuti vasunungure nyama.
Vakadzi mumabhawa eruzhinji eAtene
Mumabhawa eruzhinji eGirisi yekare maive nenzvimbo dzakagadzirirwa vakadzi chete, kunyangwe dzaiwanzoshanyirwa nevaAtene vanozvininipisa sevakadzi vepamusoro-soro vaigezerwa mudzimba dzavo. Pakushambidza vaishandisa terastotta kana mabhavhu ekugezera akazadzwa nemvura neruoko.
Iyo yakanaka yekunaka kwechikadzi muGreek yekare
Izwi rekuti cosmetic rinobva muchiGiriki zvinoreva kuti "icho chinoshandiswa kuhutsanana nekunaka kwemuviri" kunyanya kureva kumeso.
Chiratidzo cherunako rwevakadzi vechiGreek chaive runako rusina mwero. Ganda jena raionekwa seratidziro yekuchena uye kushuvira pamwe nehupenyu hwakapfuma seganda rakasvinwa raionekwa nemapoka epasi nevaranda, avo vaipedza maawa akawanda muzuva vachishanda.
Kuti vachengetedze ganda rakachenuruka, vaishandisa zvigadzirwa zvakaita sechoko, lead kana arsenic. Ivo vanoisa mamwe mabheriri-akavakirwa kutsvuka pamatama avo, kunyangwe zvaive zvakapenya kwazvo sezvo runako rwechisikirwo rwakakunda, kusiyana nekambani vakadzi vaishandisa akanyanya mavara.
Kuchengetwa kwebvudzi munguva dzekare
Kana riri bvudzi, vese varume nevakadzi vakazodza vhudzi ravo nemafuta uye vakamonera nekuti iyi dhizaini yaionekwa seyakanyanya kuratidza runako panguva iyoyo. MaGreek aifarira kufamba kunoratidzwa nemafungu uye makwenzi. Varanda vaive mukutarisira kwekuchengeta bvudzi ravatenzi vavo mune rakakwana mamiriro. Muchokwadi, mamwe evhudzi rebvudzi raipfekwa nemaGreek ekare anogona kuonekwa muzvifananidzo izvo zvichiripo nanhasi.
Vakadzi vemakirasi epamusoro vakasiyana nevaranda mune vhudzi ravo nekuti vaipfeka magadzirirwo ebvudzi uye vakaunganidza vhudzi ravo refu muuta kana zvuma zvaive zvakashongedzwa nemiseve netambo diki. Chete munguva dzekuchema ndipo pavakacheka zvishoma. Kune avo chikamu, vakadzi vepasi-kirasi vaipfeka vhudzi ravo pfupi.
Vana vaitenderwa kukura bvudzi ravo kusvika pazera rekuyaruka, parakatemwa kunopa kuna vamwari. Varume vaienda kunoveura dzimwe nguva uye havana kutanga kuveura ndebvu uye masharubu kusvikira Alexander Mukuru. Chimwe chezvinhu zvitsva zvakauya naMambo weMasedhonia nekuda kwekukunda kwake kuMabvazuva yaive dhayi rebvudzi.
MuGreek yekare blonde blonde yaifananidzira runako mukuzara kwayo. Kuti afanane naAchilles nemamwe magamba mungano dzechiGiriki, varume vaive vakaronga nzira dzekurerutsa bvudzi vachishandisa zvigadzirwa zvakaita sevhiniga, muto wemonimu, nesafron.
Bvudzi kubviswa mune yechinyakare nyika
Kuti vabvise vhudzi remuviri, vakadzi vaishandisa reza uye kumesa namate chaiwo kana nekenduru. VaGreek vekare vaizviona zvakakosha kuti vabvise bvudzi remuviri zvachose sezvo muviri wakadzikira waive mucherechedzo wekusava nemhosva, hudiki uye runako.
Waxing yaizadzikiswa nemasaji nemafuta nezvinonhuwira kunyaradza ganda. Iyi tsika yaiitwa ne kosmetés mumajimu, avo neimwe nzira vaive vatangidziri vekunaka salons.
Tsika yekushambidzika mune dzimwe tsika
Nekukunda Byzantium, Egypt, neSyria, maMuslim vakagara nhaka yavo rudo rwematsime anopisa kubva kumaRoma nemaByzantine maKristu.
Pakutanga, mutsika dzeIslam zvaifungidzirwa kuti kupisa kwehammam kwakawedzera kubereka uye, nekudaro, kubereka kwevatendi. Saka maArabu akamira kushandisa mvura kubva mufrigidarium (kamuri inotonhora) kugeza uye vakangoshandisa tepidarium uye caldarium.
Saka munyika dzeArabhu, iyo hammams yaive zvakare yakakosha nzvimbo yekuungana yenzanga uye vakamira pamasuwo emamoski. Kupfuura kwake kuburikidza navo kwaifungidzira kugadzirira uye kuchenesa kuwana tembere.
Neraki iyi tsika yekutsvinda yakaberekerwa kuGreek yekare uye yakachengetedzwa nenyika dzeIslam ichiripo nanhasi. Mumaguta mazhinji mune mabhati eArabhu kwaunogona kuwana tsika iyi yekare paganda rako. Icho chirongwa chakanakisa chekupedza vhiki yevhiki masikati, uchizorora uye uchizorodza muviri nepfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kushambidzika uye kuchengetedza muviri kuGreek yekare
Mhoroi, wakadii? Zvinoita kunge zvakanaka kwazvo kuti iwe utaure nezve izvi
Pindura kuna gshcgzc